Izinto zokukhusela umzimba | qiangjing
Kwinkqubo yokomelela komzimba, kulula kuthi ukuba sibangele ukudinwa kwemisipha kunye nokuqina kwe-tendon ngenxa ye-overexertion. Xa ubunzima be-muscle kunye ne-tendon kwenzeka, siya kuva iintlungu. Nangona umthambo ulungile kwimpilo yethu, oko kuthetha ukwenza imithambo efanelekileyo. Ukuba asithathi manyathelo afanelekileyo kwinkqubo yokuzivocavoca, sinokwenzakala. Amanyathelo okhuselo aya kubuya ngomlilo. Kwinkqubo yokuzivocavoca, kukhokelela ekugugeni ngokukhawuleza kunye nokunxiba kwamadolo, idolo edibeneyo kunye namanye amalungu, kungoko kufuneka sisebenzise izixhobo zokukhusela ezemidlalo ukukhusela izihlunu namathambo ethu xa sisenza imithambo yomzimba eyomeleleyo.
Elona candelo lisemngciphekweni womzimba womntu kukuma okuhlanganayo, okukhona esinqeni, esinqeni, egxeni, edolweni, esinqeni, ngasemva, entanyeni njalo-njalo. Iigiya zokukhusela ezemidlalo zenziwe ngokukodwa ngokwamalungu ahlukeneyo omzimba. Ngokwenxalenye yakho eyenzakeleyo, khetha izixhobo zokhuselo ezifanelekileyo emzimbeni wakho. Uninzi lwezixhobo zokukhusela zenziwe nge-nylon, irabha, imicu ye-polyester kunye nezinye iikhemikhali zezinto ezahlukeneyo. Zinezibonelelo zokuxhathisa okubuthathaka, ukuqina, ukubamba ukhululekile kunye nomoya opholileyo. Banceda iiblue magic ukuze basebenzise uxinzelelo kunye nokulungisa, ukuphucula ukuzinza kwamalungu kunye nemisipha, ukuyigcina phakathi kwinqanaba elifanelekileyo loxinzelelo, kunye nokukhusela amajoyina ngexesha lokuzilolonga. Imisipha ayizonakalisi ngokuhamba kakhulu okanye ngokuzolula okubanzi.
Umiliselo olungileyo lokukhusela kufuneka lube nezi mpawu zilandelayo.
Ukukhuselwa nokubuyiselwa kwimeko yesiqhelo: Le yeyona nto isetyenzisiweyo ebaluleke kakhulu yezixhobo zokukhusela. Ukuguqulwa koxinzelelo lwezixhobo zokukhusela kwiimisipha zoxinzelelo kunokunciphisa iintlungu, ukukhuthaza imetabolism kunye nokwenza ngcono ukuzinza kwamalungu. Ikwanesiphumo esihle sokulungiswa kwamalungu owenzakeleyo kunye nokukhusela ukulimala kwakhona. Iindwangu ezithambileyo zamkela iindlela ezizodwa zokuluka nge-ductility ekhethekileyo kunye nokubalula komoya, zinokuvelisa uxinzelelo ngeziphumo zonyango. Inokugxotha umswakama ngokukhawuleza, kubaluleke kakhulu ekuvuseleleni.
Uxinzelelo kunye nokuXhasa: Imidlalo yezokhuseleko ekhuselekileyo inoyilo lobungcali, ihambelana nokuyilwa kwe-arc yenxalenye yokukhusela. Iyabambisana nesikali kunye nokulungiswa kwesiqwengana somlingo wesixhobo esikhuselayo, siphucula amandla kunye nokuqina kwesihlunu esisongelweyo ngelixa singalahli umsebenzi wokhuselo, kwaye siqinisekisa nokuba inxalenye ayinxibileyo inesimo esihle. Ukongeza iinguqu eziguqukayo zentsimbi kwiimathiriyeli ezithile zokukhusela ezifuna ukhuseleko olukhethekileyo ukomeleza inkxaso inokunceda ukugcina uzinzo nomsebenzi wokunxunguphala wokudityaniswa ngexesha lokuhamba rhoqo kwamalungu okhuselo. Cutha amathuba okuba wenzakale ngenxa yokukhathala okungafanelekanga okanye okugqithisileyo. Ukupheka okuphezulu okuphezulu kunye nokusebenza okuhle okuxhasayo kunika ukhuseleko olungcono lweendawo ezenzakeleyo kwaye kuthintele ngokufanelekileyo ukwenzakala kwesibini.
Ukugcinwa kobushushu kunye nokuqina komoya: Ukugcinwa ngokufudumeleyo kukugcina ubushushu bomzimba kwimeko yokungazivocavoci ekuphulukaneni ngokulula, ukuze amalungu afuna ukhuseleko angabi semngciphekweni kwaye akwazi ukubuyiselwa ngcono. Kwangelo xesha, kufuneka kwakhona siqinisekise ukuba yimeko yomoya, kuba ukuzivocavoca kuya kubanjiswa, ukubakho komoya kubalulekile, ukuze ukubila kungakhutshwa ngokukhawuleza, ukuze inxenye yepakethe ibe yomile kwaye ikhululeke. Izixhobo ezifanelekileyo zokukhusela azisi kuphela isiphumo esihle sokubila, kodwa zinokugcina umswakama womphezulu ekulahlekelweni ngumphunga kakhulu. Impembelelo yokufakelwa kobushushu kukudidi lokuqala, olunokukwenza ukuba ube kwimeko entle kakhulu kwezemidlalo kwaye ukhululeke ngakumbi ekuvuseleleni.
Ixesha lokuposa: Jun-17-2020